Mangingina ratsy… mamitaka | NewsMada
Tsy mahamanina intsony ny “Raharaha Soamahamanina”? Tsy hita izay iafarany. Mangingina ho azy. Toy ny hafa rehetra ihany: ny fakana an-keriny tany Toamasina, ny “Raharaha Anjozorobe”, ny momba ny fiaramanidin’ny filoha, ny “Raharaha rongony” tany Toliara, ny andramena any Singapour…
Manginy fotsiny ny hoe kolikoly, ny kiantranoantrano amin’ny tolotrasam-panjakana, ny tsy fisian’ny fangaraharana amin’izay atao rehetra, ny hosoka sy hala-bato tamin’ny fifidianana ben’ny Tanàna sy loholona… Miara-dalàna amin’izany ny tsy fanarahan-dalàna, manomboka amin’ny lalàna fototra.
Am-boalohany ihany ny fampiakaram-peo, hetsika, fitakiana… Tsy mahaleo ny lazon’ady afitsoky ny mpitondra ny vahoaka mora manadino? Na sempotry ny fiainana isan’andro vaky… Hany ka voahararaotra hatrany amin’izay atao. Na amboletra io, na jadona. Tompon-trano mihono lava.
Lasa fahoany fahoany ny raharaha, manao ny ataony hatrany ny mpitondra. Heverina ho mandeha ho azy izany, vitavita sy tsy hitahita ho azy eny. Loza, zary mahazatra sy ekena ho mety, fomba, ara-dalàna aza rehefa anginana… Tsy misy intsony ny mpisehatra na olona fakan-tahaka amin’izao?
Ohatra ratsy amin’ny ataony ny mpitondra? Tsy hita loatra izay hoe fanjakana tan-dalàna, fitondrana tsara tantana, ady amin’ny kolikoly, fampanjakana ny fandriampahalemana; eny, na ny fitiavan-tanindrazana sy fihavanam-pirenena hoe fototry ny fampandrosoana aza. Tsy hita be ihany hatramin’izao.
Arakaraka ny fandeham-potoana, vao mainka miharatsy hatrany ny raharaha. Mampitombo an-dalana ny karazana vondrona na hetsika etsy sy eroa tato ho ato izany. Mampiaka-peo, mitsikera, mitaky… Hadino na vita ho azy ny tsy mety sy ratsy vita teo aloha? Misy hatrany ny zav-doza vaovao.
Mila miteny sy mihetsika hatrany ny vahoaka, na ny isan-tsehatra, na ny firaisamonina sivily, na ny mpanao politika… Ny isan-tsehatra sy isan’ambaratonga io; raha tsy izany, heverin’ny mpitondra fa mety hatrany ny ataony ary vitavita ho azy. Mamitaka ny fanginginana ratsy toy izao, na ny fifampiandrasana lava.